Etu ị ga - esi merie ndị ahịa | Martech Zone
Otu n'ime ihe kachasị mkpa maka azụmaahịa ọhụụ ma ọ bụ nke guzosiri ike bụ ijide n'aka na ha nwere ego na-agbanwe agbanwe. N'agbanyeghị ụdị azụmahịa ị nọ na ya, ndị ahịa na-alọghachi bụ ụzọ magburu onwe ya iji mebe ego kwụsiri ike. Akụkụ nke ihe a bụ na ndị ahịa ga-efu oge oge.
Iji meziwanye ihe na-efunahụ ya, azụmaahịa nwere ike ịme ihe abụọ:
Nweta ndị ahịa ọhụrụ
Duputa atumatu iji merie n’agha ndị ochie.
Ọ bụ ezie na ha abụọ bụ akụkụ dị mkpa nke azụmaahịa ahụike, eziokwu ka bụ na ịnweta ndị ahịa ọhụụ jiri 5x ọzọ karịa ịkpọ ndị agadi. Site n'inwe ndị ahịa gara aga, ị maraworị na ha nwere mmasị na ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa gị, ụdị omume ịzụ ihe ha dị, yana nke ọrụ ha kachasị masị ha.
Agbanyeghị, iweghachite onye ahịa ochie bụ ihe dị mfe ikwu karịa eme. E nwekwara usoro maka mmeri azụ nke pụrụ iche nye ndị ahịa ọ bụla. You'll ga-enyocha ozi ị nwere na ha, chịkọta ụzọ ọpụpụ na nyocha ọrụ, wee dozie atụmatụ maka ndị ahịa ọ bụla. Lelee ihe omuma a nke Fundera di n'okpuru iji muta uzo di irè merie n’agha mbụ ndị ahịa.
Tags: nnwetanjigide ndị ahịaobi ụtọ ndị ahịaozi ịntanetị njikọfunderaNyocha rfmmerie n’aghammeri-azụ na-enye